နားခိုရာ: what is Beta?
Posted by little moon at 12:24 PM
ဆေး ဆိုရင် တော. Approved ဖြစ်ပြီးမှ သောက် ပါ့မယ်။ ကျန်တာ ကတော. အခြေ အနေ အရပေါ. ။ ကိုယ့် ကို ထိခိုက် နစ် နာ မှု မရှိ ဘူးဆိုရင် တော. စမ်းသုံး ကြည်.ပါ့မယ်။ အော်ကွေ.ကြည် ကောင်းတယ် စားကြည့်ပါလား လို့… ညွန်ါ်ရင် တော့စားကြည့်ပါ့မယ်။